Iqembu lamahlaya i-Ikorodu Bois libuyile nevidiyo entsha | Scrolla Izindaba
Iqembu lamahlaya i-Ikorodu Bois libuyile nevidiyo entsha
Wait for it😂 pic.twitter.com/RD3HZDsfkA
— ikorodu bois (@IkoroduB) March 21, 2021
Iqembu lamahlaya i-Ikorodu Bois libuyile, futhi libuye ngegiya eliphezulu njengoba kubonakala lilingisa izitayela ze-BMX ezenziwa ngontanga yabo.
Leli qembu lamahlaya lase-Lagos, e-Nigeria lazakhela udumo ezinkundleni zokuxhumana ngokwenza kabusha izigcawu ezivela kumavidiyo omculo adumile nakumabhayisikobho ase-Hollywood.
Kuvidiyo yabo yakamuva, balingisa isiqeshana esihlaba umxhwele lapho abafana abambalwa abasebancane beshintshisana khona ngamabhayisikili abo ngenkathi begibele kuwo.
Kule vidiyo, okungeyona yeqembu le-Ikorodu Bois, abafana bahamba ngamabhayisikili, futhi bahamba ngejubane, lapho abathathu babo behle ngesikhathi esisodwa, beshiya amabhayisikili abo ehla ngomgwaqo. Ngemuva kwalokho babonakala begijimela ukubamba ibhayisikili lomunye, bese begibela ngaphandle kokuma nakanye.
Isiqeshana sevidiyo siphela uma umfana ophambili esehambela kude.
Kodwa-ke iqembu lamahlaya i-Ikorodu, abafana base-Lagos abagibeli bona ama-BMX lawa asesitayeleni, kodwa bagibele amabhala amadala aphushwa ngabanye abafana.
Elinye lamabhala lifakwe ngisho nezibuko ezikhombisa emuva kanye nohlaka olumnyama.
Njengenjwayelo, leli qembu lamahlaya lithola injabulo ngokuhlekisa abanye, futhi lokhu kubenza bakhohlwe isimo sabo sobubha uma benza amavidiyo abo.
Le vidiyo ye-Ikorodu iyincwenga kanti, futhi ifanelekile ukubukwa.
Umthombo wevidiyo: @IkoroduB